सोनोकेमिस्ट्री भनेको के हो? - हिल्सचर
Utrasonic शीर्षक: "सोनोकेमिस्ट्री भनेको के हो?"
सोनोकेम्याटिक्स अल्ट्रासाउन्डको रासायनिक प्रतिक्रिया र प्रक्रियाको आवेदन हो। भोजको प्रयोग रासायनिक प्रतिक्रियाहरू जस्तै संश्लेषण र क्याप्टिसेसन तीव्र बनाउन प्रयोग गरिन्छ। जब तीव्र अल्ट्रासाउन्ड लहरहरू जोडेहरू तरल पदार्थमा हुन्छन्, ध्वनिक cavitation को घटना हुन्छ। अल्ट्रासोनिक cavitation reactants को बीच मा जन हस्तांतरण मा सुधार, प्रतिक्रिया को गति र / या रासायनिक मार्ग को बदलन को अनुमति दि्छ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक प्रयोगशाला र औद्योगिक यन्त्रहरूको बारेमा थप जान्नुहोस् र तिनीहरूले कसरी गुणासोना सोनिककोमिकल प्रक्रियाहरूमा प्रयोग गर्दछन्!